gtalk password ကာကွယ်နည်း နဲ့ ခိုးနည်းများ-၃ | တောရက်စ် (mc)
gtalk password ကာကွယ်နည်း နဲ့ ခိုးနည်းများ-၃
အကောင့် ပျောက်သွားရင် ပြန်ယူနိုင်ဖို.ပါ…
gtalk icon က user name, password,sign in ရဲ့အောက်က Forgot your password? ဆိုတာကိုဖွင့်ပါ….(user name နဲ့password ရေးပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်.
..မသိတဲ့ password ပေါ့လေ…ရေးချင်တာရေး sign in တစ်ခါဝင်ရပါမယ်…wrong password ပြမှအဲ့ဒါဖွင့်ပါ)………အဲ့ဒီမှာ password ပျောက်တဲ့ အကောင့် ရိုက်ထည့်ပါ…ပြီးရင် submit ပေါ့…..အဲ့ဒါပြီးရင် box ထဲမှာပေးထားတဲ့ စာလုံးတွေ
ရေးပါ (ဖတ်ရခက်ရင် ပြောင်းလို.ရပါတယ်..)
အဲ့ဒီမှာ password ပြန်ယူဖို့နည်း ၃ နည်းရှိပါတယ်…..
၁-security question ဖြေပြီး password reset လုပ်တာ
၂-recovery email သုံးပြီး ပြန်ယူတာ နဲ့
၃-အပေါ်က နှစ်ခု မသိရင်တော့ အောက်နားမှာ Can’t access any of these recovery options? Verify your identity by answering multiple questions about your account…ဆိုတာရှိပါတယ်..အပြာနဲ့ရေးထားတဲ့ Verify your identity ဆိုတာကို ဖွင့်ပါ
by answering multiple question ဆိုတဲ့ အတိုင်း အများကြီး ဖြည့်ရပါမယ်……….(လူတစ်ယောက်က ကိုယ် account ကြောင်း ကို တော်တော်လေးသိနေရင် ဒီနည်းနဲ့ ယူသွားနိုင်ပါတယ်)
.An email address we can use to contact you ဆိုတာမှာ ကိုယ့်ကို ဆက်သွယ်လို.ရမယ့် အကောင့် ဖြည့်လိုက်ပါ………
Account creation date,Last password you remember နဲ့Last successful login date ဆိုကို (အနီးစပ်ဆုံး) ဖြည့်ပါ…….
.security question နဲ့ Most recent recovery email address ဆိုတာကိုလဲ ဖြည့်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်……..
Email addresses of up to five frequently emailed contacts ကို ကိုယ့်အကောင့်ထဲက (ပြောတာအများဆုံး) ငါးယောက်ရဲ့ address တွေဖြည့်ပါ……label တွေ ရှိရင်ဖြည့်ပါ…..
.ပြီးတော့ Did you receive an invitation to create your account? ဆိုတာကိုလဲ ရတယ်/မရဘူး ပေါ့……..အားလုံးပြီးရင်တော့ submit ပေါ့…………..
အဲ့ဒါနဲ့ ဆင်တဲ့ နည်းတစ်နည်းရှိပါသေးတယ်….ဒီနည်းကို တာ့ ကျွန်တော့ ဦးလေးဆီကနေပဲ ……….ctrl+c…..ctrl+v ပေါ့ဗျာ…စာရိုက်မကျွမ်းတော့ အများကြီးမရေးနိုင်လို.ပါ…..(အရှက်ပြေပေါ့ဗျာ)
security မေးခွန်းရော secondary email မသိဘူးဘူးဆိုရင်တော့ ဂူးဂဲက ကိုယ်မေ့သွားတဲ့အကောင့်ကို Reset Password ကျအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ အဲဒီ Reset Password ကျအောင်လို့လည်း အရင်အကောင့်ဖွင့်တုန်းကထားခဲ့တဲ့ security မေးခွန်းကို တတ်နိုင်သမျှ အနီးစပ်ဆုံးဖြည့်ပေးပါ အဲဒီအခါကျရင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး မညီမညာတွေကိုဖြည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် အဲဒီအင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ပေးပါ နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီအကောင့်ကို ဂုးဂဲက Reset Password ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်
Reset Password ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်း အဲဒီမှာစာတွေကျလာပါလိမ့်မယ် ..
To initiate the password reset process, please follow the instructions sent to your ******@gmail.com email address……………………………………..
ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတွေအများကြီး ကျလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီမှာ This Form ဆိုတဲ့ လင့်လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် အပြာရောင်လေးနဲ့ပါ အဲဒါလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ မရ ရင် http://www.google.com/support/accounts/bin/request.py?ara=1 အဲဒါကိုကလစ်လိုက်ပါ အဲဒီအခါကျရင်တော့ သူမေးခွန်းတွေကျလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီမေးခွန်းတွေမှာကြည့်လိုက်ပါ အောက်လေးကိုနဲနဲဆင်းလိုက်ပါ An email address we can use to contact you ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီ မှာ ကိုယ်လက်ရှိ သုံးလို့ရနေတဲ့ အကောင့် ကို ရိုက်လိုက်ပါ ဥပမာ example@gmail.com ဆိုပြီးတော့ ရိုက်လိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်ကိုထပ်ဆင်းလိုက်ပါ Describe the problem you’re experiencing ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတွေ့လိမ့်ရလိ့မ်မယ် ကျွန်တော်ကတော့ I believe someone has taken over my account ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုရွေးချယ်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ အောက်ကိုထပ်ဆင်းလိုက်ရင် Product information ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Do you use Gmail with this account? ဆိုတာကိုတော့မဖြစ်မနေ ရွေးပေးရပါလိမ့်မယ် အဲဒါကိုရွေးလိုက်ရင် ဘောက်တွေကျလာလိမ့်မယ် အဲဒီအခါကျရင် Gmail username နေရာမှာကိုယ် လိုချင်တဲ့အကောင့်ကို ( ပတ်ဝေါ မေ့နေတဲ့အကောင့်) ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ နောက်ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာ Most recent secondary email address နဲ့ Do you haveaverification code ဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားလို့ရပါတယ် ပြီးရင် အောက်မှာ Email addresses of up to five frequently emailed contacts ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီမှာ ကိုယ်နဲ့ အရင်ချက်ခဲ့တဲ့ ဂျီမေလ်းယူဇာ ၅ ယောက် သုံးယောက်လောက်လည်းရတယ် အဲဒါကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ ယူဇာနိမ်းတွေကိုရိုက်ထည့်ရမှာနော် ( ကိုယ်က လူများအကောင့်ကိုခိုးချင်ရင်လည်း ဒါတွေသိထားမှရမှာနော် ) အဲဒီလိုရိုက်ပြီးတာနဲ့ အောက်မှာ အဆင့် ၄ ဆင့်ရှိသေးတယ် အဲဒါတွေကိုကျော်လို့ရပါတယ် အောက်ကိုထပ်ပြီးဆင်းလိုက်ရင် Other account information ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီမှာ Account creation date ဆိုတဲ့နေရာမှာ အကောင့်စဖွင့်တုန်းက လ ရယ် ခုနှစ်ရယ်ကို ဖြည့်ရပါမယ် (တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်က ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူရဲ့အကောင့်ကိုခိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကို နဂိုတည်းက ဒီအကောင့်ကိုစသုံးတာ ကြာပြီလား ဘယ်တုန်းက စသုံးတာလဲဆိုပြီး နဲနဲမသိမသာမေးထားသင့်တယ် ဟီး ကျွန်တော့်အကျင့်တွေပြောပြနေတာ ) ပြီးရင်အောက်မှာ Last successful login date ဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒါက အကောင့်ကိုနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ပါ အဲဒါက တော့လွယ်မယ်ထင်တယ်နော် အဲဒါလေးဖြည့်ပြီးရင်တော့ အောက်မှာ Last password you remember ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် အဲဒါလေးကတော့ အကောင့်ကိုသုံးခဲ့တုန်းက မှတ်မိသမျှထဲက ပတ်ဝေါ တစ်ခုခု ပါ ဟိုအရင်တုန်းက သုံးနေတဲ့ ပတ်ဝေါဆိုရင်လည်းလက်ခံပေးပါတယ် အရေးကြီးတာက အဲဒီ ကိုယ်ထည့်တဲ့ပတ်ဝေါကို အကောင့်မှာ တစ်ခါတစ်လေသုံးဖူးရင်တောင်ရပါတယ် အဲဒါလေးကိုဘေးကဘောက်လေးထဲမှာဖြည့်ပေးလိုက်ပါ (မိန်းကလေးတွေက များသောအားဖြင့် သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ဒိတ် ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ပတ်ဝေါအဖြစ်ထားတတ်ကြပါတယ် ) အဲဒါလေးကလည်း အကောင့်ကိုခိုးချင်တယ်ဆိုရင်တောင် အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်နော် ပြီးရင်တော့ အောက်ဆုံးမှာ Submit ဆိုတဲ့ခလုပ်ကိုပျော်ပျော်ကြီးနှိပ်လိုက်ပေတော့ ဘော်ဘော်တို့ရေ ပြီးရင်ကိုယ်ခုနဖြည့်ထားတဲ့ An email address we can use to contact you ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာ ဖြည့်ထားတဲ့ မေလ်းကိုဖွင့်ပြီးထိုင်စောင့်နေပေတော့ ကိုယ့်ဆီကို သိပ်မကြာခင်အချိန်တွင်းမှာ အများဆုံးနာရီဝက်အတွင်းမှာ ဂူးဂဲကနေ အီးမေလ်းတစ်စောင်ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ် Subjcet က တော့
Re: [#????????] I can’t access my account ဆိုပြီးကိုယ့်ဆီကို အီးလ်မေး ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ် အဲဒီအီးလ်မေးလေး ကိုဖွင့်လိုက်ရင် ပထမဆုံး အကြောင်းမှာပဲ https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd ဆိုတဲ့လင့်လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ( အဲဒါလေးကိုမတွေ့ရင် တော့ လုံးဝမရပါဘူး ထပ်ပြီးမေးခွန်းတွေမှန်အောင်ကြိုးစားလိုက်ဦးပေါ့ )အဲဒါလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ရင် Password Assistance ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘောက်တစ်ခုကျလာပါလ်ိမ့်မယ် အဲဒီဘောက်မှာ ကိုယ်ခုန ပတ်ဝေါလိုချင်တဲ့ အကောင့်ယူဇာနိမ်းကိုပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ အဲဒီအခါကျရင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး မညီမညာနဲ့ ကုဒ်တွေပြန်ရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် အဲဒါကိုပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ သူမြင်ရတဲ့အတိုင်း ပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် အဲဒါရိုက်ပြီးတာနဲ့ temporary question? ဆိုတာ ကျလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီ temporary question? အောက်မှာတွေ့လား Change your password by sending an email to your secondary address အဲဒီလင့်လေး အဲဒါလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ရင် ခုန က ကိုယ်ဖွင့်လို့ရတဲ့ မေးလ်ထဲကို ဂူးဂဲကနေ နောက်ထပ်တစ်စောင်ထပ်ပြီးပို့ပေးပါလိမ့်မယ် .. အဲဒီမေလ်းကိုဖောက်ဖတ်လိုက်ပါ Google Password Assistance
ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဝင်လာမှာပါ အဲဒီအောက်မှာလင့်လေးတစ်ခုပါ ပါတယ် အဲဒါလေးကို ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ရပါပြီ…………
Posted by တောရက်စ် (mc) on February 24, 2012 in G-Talk, G-Mail.